Ukuhambisa kwakhona i-UNWTO ukusuka eMadrid ukuya eRiyadh itywina i-United States yoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ukuhambisa kwakhona i-UNWTO ukusuka eMadrid ukuya eRiyadh itywina i-United States yoKhenketho
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kuza kubakho ingomso elitsha lokhenketho. Lo mso omtsha, okanye abanye bathi imeko yesiqhelo entsha sele iqale. Kubonakala ngathi iSaudi Arabia ivela njengomntu ocinga ngokucacileyo nenkokeli.
ISaudi Arabia iyavela njengesigebenga esitsha seshishini lokuhamba kunye nezokhenketho eliqaqambisa amagama eempawu kunye namacandelo obunkokeli kwezokhenketho kunye.
Ukuhambisa ikomkhulu le-UNWTO ukusuka eMadrid ukuya eRiyadh kuyeyona ntshukumo inesibindi eyenziweyo, kwaye iSaudi Arabia ibonakala ngathi izimisele.
I-Saudi Arabia inokuba nethuba lokukhokela ukhenketho kwisigaba esilandelayo emva kwe-COVID, ngaxeshanye uBukumkani bunethuba lokulungisa iimpazamo kwinkqubo yonyulo ye-UNWTO.
Ukuhamba kunye nehlabathi lokhenketho ludinga uncedo ekubuyeni kumkhondo. Kubume behlabathi, i IBhunga lezoKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho (WTTC) imele awona malungu anemveliso kwaye anefuthe kushishino labucala lokhenketho nakwezokhenketho. Kubalulekile ukuba i-WTTC inxibelelane kwaye ilungelelanise necandelo likarhulumente. Icandelo likarhulumente limelwe yiarhente edibeneyo yeUN, i Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO).
Ukusukela uNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvilhis uthathe isihlalo kwi-UNWTO, uMbutho wezoKhenketho weHlabathi waba yiarhente eneemfihlo ezininzi, kubandakanya ukunqunyulwa kwi-WTTC.
ISaudi Arabia iyayifumana. Ubukumkani bunemali kunye nefuthe lokubeka imeko entsha yesiqhelo kunye kunye nokubumba ikamva lokhenketho lwehlabathi.
I-China izamile oku emva kwe-UNWTO General Assembly e-Chengdu, xa uZurab wavotelwa ukuba asebenze. I-China yenza i Umanyano lwezoKhenketho kwiHlabathi liphela. Lo mbutho nangona kunjalo awuzange uhambe.
Ihlabathi lezokhenketho kwihlabathi lisengxakini. Wonke amashishini, ilizwe ngalinye lilwela ukusinda kwalo ngamaxesha endyikitya yokufa. Ngelixa uninzi lunciphisa inkcitho eninzi, iSaudi Arabia ichitha imali kukhenketho nanjengoko kungekho lizwe lakha lakwazi ukwenza: Iibhiliyoni kunye neebhiliyoni zeedola.
Umphathiswa Wezokhenketho u-Ahmed Al-Khateeb ubonwe ehamba emhlabeni ngesitayile kwaye uhlala enetempile enkulu yabacebisi.
Inokwenzeka ukuba wayenxibelelana nokuninzi, kwaye ebanzi kakhulu kunoNobhala Jikelele we-UNWTO. Abathunywa baseSaudi bahlala beyinkwenkwezi kuwo wonke umsitho.
Nge-Epreli kulo nyaka, i-WTTC yakwazi ukukhupha ingqungquthela yokuqala yomhlaba emva kwe-COVID-19 kunye nokudibanisa umhlaba wezokhenketho eCancun, eMexico.
Ngoncedo oluncinci oluvela eSaudi Arabia emelwe ngu-HEUAhmed Al Khateeb, umphathiswa wezokhenketho kuBukumkani, ezinye iindwendwe ezazize kwi Ingqungquthela yeWTTC yeHlabathi wagoduka enomtsalane wethemba emva kokudibana nomphathiswa wase-Saudi. Wayebizwa ngokuba yinkwenkwezi ekhanyayo yokhenketho lwehlabathi.
Kwiiveki ezimbini emva kwale ngqungquthela ye-WTTC ephumeleleyo, u-CEO we-WTTC kunye nomphathi wale ngqungquthela, owayengumphathiswa wezokhenketho eMexico, uGloria Guevara, wabhengeza, ukuba uza kuthuthela eSaudi Arabia ngoJulayi ukuze abe ngumcebisi kumphathiswa wezokhenketho wase-Saudi Arabia.
Ngamanye amagama umphathiswa waseSaudi juqeshe oyena mfazi unempembelelo kwezokhenketho njengomcebisi wakhe. UGloria ngoku useRiyadh usebenzela uRhulumente waseSaudi.
Umphathiswa waseSaudi ngelo xesha wathi: “Sinelifa lemveli elomeleleyo kunye namawaka amabali awodwa ekufanele ukuba abaliswa. UGloria uzisa ubuchwephesha bamanye amazwe kunye nothungelwano olukhulu lwehlabathi ukusukela ngexesha lakhe emele icandelo lezokhenketho kunye nezohambo njenge-CEO ye-WTTC kunye namava ngokuthe ngqo okuvela kushishino lwezokhenketho olusakhulayo ukususela kwixesha lakhe njengoNobhala wezoKhenketho eMexico, oko kuya kusinceda njengelizwe lethu elikhulu utyalo-mali olulinganiselweyo kwezokhenketho luye kwinqanaba elilandelayo. ”
Umphathiswa uchanekile. UGloria akayedwa kwindawo yakhe entsha. Iziko lengingqi le-WTTC lavulwa njengesipho ngu-Mphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi Arabia.
Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (I-UNWTOukusekwa kweofisi yengingqi eRiyadh, ukuxhasa ukukhula kwecandelo lezokhenketho kuMbindi Mpuma nanjengoko lichacha kubhubhane wecoronavirus.
Iofisi igubungela amazwe ali-13 akule ngingqi kwaye isebenza njengeqonga lokwakha ukukhula kwexesha elide kwicandelo kunye nophuhliso lwabasebenzi kwicandelo lokuhamba nokhenketho kulo mmandla.
Iofisi ibandakanya iZiko leeNkcukacha-manani elizinikeleyo elinjongo yalo ikukuba ligunya eliphambili kubalo lwamanani okhenketho lommandla.
Inyathelo lokugqibela kukwenziwa ngokokuthenjwa eTurboNews kwimithombo.
Ihambisa uMbutho wezoKhenketho weHlabathi ukusuka eSpain usiya eSaudi Arabia.
I-arhente emanyeneyo ye-UN ibiseMadrid, eSpain ukusukela oko yasekwa nge-1 kaNovemba ngo-1975.
Ukuhambisa i-UNWTO eSaudi Arabia kuya kuba linyathelo elikhulu kunye notshintsho olubalulekileyo kukhenketho lwehlabathi. Iya kunika uBukumkani base-Saudi Arabia kungekuphela nje ukuba bukhokele kolu shishino, kodwa isikhundla esisisigxina sebhunga elilawulayo.
Eli nyathelo kufuneka livunywe yi-General Assembly ecwangciselwe u-Okthobha walo nyaka eMorocco. Funda INdibano eNkulu ye-UNWTO eMorocco: Ngaba yimfihlo engekatyhilwa?
Ngoku ka eTurboNews imithombo, uRhulumente waseSpain uphendule waphoxeka kwaye uchasa ngokuqinileyo inyathelo elinje.
Kubonakala ngathi eli nyathelo lalisele licwangcisiwe ngoSeptemba 2017 kwi-UNWTO General Assembly eChengdu, China.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO 2017
Ingachaza ukuba kutheni iSaudi Arabia ixhasa uZurab Pololikashvil kunyulo oluthandabuzekayo e-China, kunye nokunyulwa kwakhe kwakhona ngoJanuwari kulo nyaka kwi-UNWTO SG ngokuchasene nomgqatswa Bhareyini, UYE u-Mai Al Khalifa .
Bobabini ababengunobhala jikelele we-UNWTO, uGqr Taleb Rifai kunye noFrancesco Frangialli bayayichasa indlela olwenzeke ngayo olu lonyulo. Babhala ileta evulekileyo emnxebeni oya kuyo buyisela ubume bohlelo kwinkqubo yokhetho lwe-UNWTO . Le projekthi yokwazisa ibiyinyathelo lika- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, umbutho wabucala kunye neenkokheli zokhenketho kumazwe ali-127, kwaye wawutyikitya iinkokheli ezininzi.
Owayesakuba nguNobhala Jikelele we-UNWTO kunye nalowo wayesakuba yi-CEO ye-WTTC uNjing.Geoffrey Lipman. ULouis d'Amore, umseki kunye nomongameli we IZiko laMazwe ngaMazwe loXolo ngezoKhenketho (IIPT), noJuergen Steinmetz, usihlalo wale ndawo intsha Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi batyikitye amagama abo bexhasa le leta.
Ukusebenza kwe-UNWTO kukhenketho lwehlabathi kuye kwathandatyuzwa emva kwendawo ngabantu abaninzi.
Ngoku ka eTurboNews imithombo, amazwe aye afikelela eSaudi Arabia ngoncedo.
Kukho i-lobby ekhulayo yokwakha inkxaso ukuhambisa i-UNWTO eSaudi Arabia. Ubukumkani buye babamba iindwendwe kwaye baba ngabahlobo kwishishini xa beqhuba ngemiceli mngeni engenakwenzeka kumanqanaba amaninzi.
Nangona kunjalo amazwi aphikisayo athi oku kuya kunika iSaudi Arabia ulawulo olugqithisileyo, abanye babhekisa kwimicimbi yamalungelo oluntu kunye nokulingana ebukumkanini.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO kuya kufuneka ivume isindululo se-UNWTO Council ngoJanuwari sokuqinisekisa uZurab Pololikashvilhis kwikota yesibini.
I-Saudi Arabia ivula ucango lokuzisa umhlaba wezokhenketho kunye. Inokuba njalo lungisa iimpazamo ezithile, kwaye usete umendo weposi ye-COVID-19 kwikamva lezokhenketho.
eTurboNews yafikelela kuMcebisi oKhethekileyo we-UNWTO SG u-Anita Mendiratta kunye noMarcelo Risi, uMlawuli wezoNxibelelwano, uMbutho wezoKhenketho weHlabathi. Khange kubekho mpendulo.